Umthetho | Isiseko soMvuzo -Uthando, isini kunye ne-Intanethi
Uthando, ubulili, intanethi kunye nomthetho unokusebenzisana ngendlela ezinzima. IsiSeko soMvuzo singakunceda uqonde oko umthetho uthetha wena nentsapho yakho.
E-UK, umntu onemifanekiso evusa inkanuko yesini yabantwana (nabani na ongaphantsi kweminyaka eli-18) unokubekwa ityala lokwabelana ngesondo. Oku kubandakanya kwelinye icala lokubonakala, abantu abadala abakhuthazwayo ukuba bafune ukunxibelelana ngokwesini kunye nabantwana, ngokusebenzisa ulutsha ukwenza kunye nokuthumela 'ii-selfies' zeze okanye ezinobunqunu kwiminqweno yothando olunokubakho, kunye nokuba nemifanekiso enjalo.
Ujoliso lwethu lukwimeko yezomthetho eBritane, kodwa imiba iyafana kumazwe amaninzi. Nceda usebenzise le ndawo njengesiqalo.
Kule candelo I-Foundation Foundation ihlola izinto ezilandelayo:
• Uthando, ubulili, intanethi kunye noMthetho
• Ingxelo yengqungquthela yobudala
• Ubudala bemvume
• Yintoni imvume kwimithetho?
• Imvume kunye nentsha
• Iyintoni imvume kwimisebenzi?
• Ukuthunyelwa kwemiyalezo
• I-Sexting phantsi komthetho waseSkotland
• Ukuthumela imiyalezo ngefowuni phantsi komthetho waseNgilani, iWales kunye neMantla eIreland
• Ngubani othumela i-sexting?
• Phindela iphosi
• Ukunyuka kolwaphulo-mthetho ngokwesondo
• Icandelo lezonyango
• I-webcam yesondo